အဲဒီဆိုင်ခန်းတွေ သိပ်မစည်ကားခင်ကလည်း အဲဒီလူကြီး မြန်မာလက်ဘက်ရည်ဆိုင်တို့၊ ပဒုမ္မာဈေးတို့၊ ပလဲနက်ဟိုတယ်တို့၊ နေးတစ်ဓမ္မာရုံတို့၊ ပုဂံထမင်းဆိုင်တို့မှာ မတွေ့မိဘူးလား။
ပြုံးပြတတ်တာကတော့ မိတ္တဗလ ဋီကာကို အတိအကျ လိုက်နာလို့နေတာ ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ “လူတွေ့ရင် ပြုံးပြပါ” ဆိုတာလေ။ နောက်ပြီး ဒဂုန်တာရာပြောသလို နိုင်ငံရေးမှာ အမြဲတမ်း ရန်သူမရှိ၊ မိတ်ဆွေသာ ရှိတယ် ဆိုတာလိုပေါ့ဗျာ။ ဒါထက် ကိုစေးထူးဆိုင်မှာရော ဘာတွေ အားပေးသွားသေးလဲဗျ။
ဈေးတန်းထဲကလူ ဈေးတန်းထဲလူ သူကရွာပြန်တော့မယ်တဲ့လား?
အပြုံးဆိုရာမှာလဲ အမျိုးမျိုးရှိသား… ကြိုက်ပြုံး… ပျော်ပြုံး… ကြိတ်ပြုံး… မဲ့ပြုံး… ခနဲ့ ပြုံး…….
ဒါထက်… ကျွန်မဆိုင်လေးဘက်လဲ လမ်းကြုံရင် ၀င်ခဲ့ပါဦး…
Jul 23, 2008, 10:42:00 PM
Dear Ko Say Htoo
I can't see other posts. Only latest post. Please show me how to fix it. Thanks.
Jul 24, 2008, 2:58:00 AM
Jul 24, 2008, 6:47:00 AM
ပြန်သေးပါဘူး။ တနှစ်နီးပါးလိုသေးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်ရင် ဒီပြုံးဖြဲဖြဲကြီးကို လွမ်းနေရအုန်းမှာပဲ ဟဲဟဲ
Jul 24, 2008, 9:08:00 AM
အင်းး ဖျက်လိုဖျက်ဆီးမလုပ်တာရယ်... သူကြီးကို နာနာ ကန်တော့ဖို့ ဖိအားပေးမသွားတာရယ်ကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရတော့မှာပဲ :D
Jul 24, 2008, 7:16:00 PM
ကျွန်တော်ကတော့ ဖွင့်ချင့်လို့သာ ဖွင့်ထားရတာ.. မကိုက်ဘူးရယ်.. အရင်းထဲက ပါနေတယ်.. :) [ ပြုံးပြတာ အကျင့်ပါနေလို့ :) ]
Jul 25, 2008, 5:29:00 AM
ဈေးတန်းထဲက လူ လာလည်သွားပါတယ် ... အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုပေးတာ ကျေးဇူး ... :)
Jul 25, 2008, 10:35:00 AM
အဲဒီလူကြီးကို သွားတိုက်ဆေး ကြော်ငြာ ရိုက်ခိုင်းရမယ်။
သည်ပုံကို ကြည့်ပါ အဝေးကနေ မြင်နိုင်သည် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဟဲဟဲ...
သြော်... ဒါနဲ့ ဆရာသမားက မိန်းမနိုင်ကြောင်းပါ ကပ်ကြွားထားတယ်ဗျို့။ တွေ့မယ် တွေ့မယ် သူ့ မဟေသီ ထိပ်ခေါင် မဒမ်ကြီး အွန်လိုင်း လာမှ မသိမသာလေး ကပ်ချွန်ပေးလိုက်အုံးမယ်။ အဟက်...
Jul 25, 2008, 11:03:00 AM
သင့်မျက်နှာအား အရင်ဆုံးပြုံးလိုက်ပါ ။
အားလုံးအတွက် ပါ ။
Jul 25, 2008, 11:04:00 AM
ကိုယ့်တာဝန်ပိုင်းကို အကောင်းဆုံး အရိုးသားဆုံး လုပ်ကြဖို့ပါပဲ
တာဝန်ဆိုတာရယ် လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာရယ် ရိုးသားဖို့ဆိုတာရယ်
မှားရင်လည်းမှားမှာပေါ့ဗျ နော် ရမ်းတဲ့သူတွေများတော့လည်း တွေးရတာပေါ့ဗျာ
Jul 25, 2008, 2:20:00 PM
မှတ်ချက်လာပေးသွားကြသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်တွေ အားလုံး အနက်ကမှ ကိုမုတ်သုံလေး ပြောသွားတဲ့ အထဲက အချက်တွေကိုတော့ ကျနော် နည်းနည်းလောက် ပြန်ပြောချင်တယ်။
ရွာမှာ မနေနိုင်လို့ ထွက်သွားတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ အဲဒီလူတွေ ဘာကြောင့် ထွက်သွားရလဲ ဆိုတာကို ကိုမုတ်သုန်လေး ခွဲခြား နားလည်ပေးဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်။ ကိုမုတ်သုန် ဖြတ်သန်းရှင်သန်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘက်တဘက်တည်းကို ကြည့်ပြီးတော့ ရွာကထွက်သွားတဲ့လူက ရွာကောင်းကျိုး ပြောခွင့် ရှိလို့လားလို့တော့ တဘက်စောင်းနင်း မပြောစေချင်ဘူး။ ရမ်းတဲ့လူတွေ များတယ်ဆိုရင် အဲဒီရမ်းတဲ့လူတွေကို မရမ်းအောင်ရော ကိုမုတ်သုန်လေး မကြိုးစားကြည့်ချင်ဘူးလား။ ကိုမုတ်သုန်လေး ပြောသလိုပဲ ခင်ဗျားက ခင်ဗျားနားလည်ထားတဲ့ တာဝန်ဆိုတာကို ရွာရဲ့ အမှန်တကယ် ကောင်းကျိုးတွက် တကယ်ပဲ လုပ်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒီရမ်းတဲ့လူတွေ ခင်ဗျားကိုကြည့်ပြီး သူတို့ရမ်းနေရတာကို ရှက်လာပါလိမ့်မယ်။
ကိုမုတ်သုံလေးနဲ့ ကျနော်ဆိုတာက ထဲထဲဝင်ဝင် ခင်မင်တယ်လို့ ပြောရင် ပိုမှန်မယ် ဆိုတော့ ခင်ဗျားဆီကနေ အဲဒီလို စကားထွက်လာတာကိုတော့ ကျနော် တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ခင်ဗျား နားလည်စာနာတတ်လာအောင် ရွာပြင်ရောက်ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀တွေ အကြောင်းကို ကျနော် အသေအချာရေးပါဦးမယ်။
ကျနောပြောတဲ့စကားဟာ ဘက်တစ်ဖက်တည်းက ကြည့်ပြီးပြောခဲ့တာပါပဲအစ်ကို
ရွာအပြင်ရောက်ပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေနေကြတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးရှိနေတာပဲဆိုတာလည်း ကျနော်သိပါရဲ့
ရွာအပြင်ရောက်ပြီး ရွာကောင်းကျိုးကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်လုပ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်တော်သိပါရဲ့
ကျနော့စကားက ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းရမ်းပြီး ပြောလိုက်သလိုဖြစ်သွားသလားလို့ ကော်မန့်ပေပြီးတော့ တွေးမိပါသေးရဲ့
အပြင်မှာဘာတွေဘယ်လောက်အထိ ကျယ်ပြန့်နေမလဲ ခင်းကျင်ထားမလဲဆိုတာ ကျနော့ပြတင်းပေါက်ကကြည့်လိုက်တဲ့အနေအထားက ပြည့်စုံချင်မှပြည့်စုံမယ်ဆိုတာလည်း ယူဆမိပါရဲ့
အထူးသဖြင့်စိတ် စိတ်တွေကို နားလည်ဖို့ဆိုတာ အဌားခံစားလိုက်ရုံနဲ့ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း ကျနောလက်ခံပါတယ်
ကျနောပြောလိုက်တဲ့စကားဟာ အပြုသဘောမဆောင်ဘူးဆိုရင်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါရဲ့ဗျာ
ကိုစေးထူးပြောသလိုပါပဲ ကိုစေးထူးနဲ့ ကျနောဆိုတာ ထဲထဲဝင်ဝင်ခင်တဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် ကျနော့စိတ်ကို အစ်ကိုပိုနားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါရဲ့ဗျာ
အစ်ကိုရေ ကျနောတစ်ခု သွားသတိရမိပါတယ်
ဂဏန်းတွေကိုပလိုင်းထဲထည့်ထားတဲ့အခါ တစ်ကောင်က ပလိုင်းကလွတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကို ကျန်တဲ့ကောင်တွေက ဆွဲချတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပါ
စကားလုံးတွေကတဆင့် ကျနောတို့တတ်စွမ်းသလောက် အမှန်တရားကိုချဉ်းကပ်ကြရမပေါ့ဗျာ
ကျနော့အနေနဲ့ မှားနေတယ်ဆိုရင်တော့ ပြင်လိုက်မှာပါပဲ
ဒွသည်ကသာလျှင် ဖက်တဖက်တည်းကြည့်ခြင်းဆိုတာရယ် တစ်ဖက်စောင်းနင်းဆိုတာတွေရယ်ွကလွတ်မြောက်နိုင်မယ်မဟုတ်ပါလား
Jul 26, 2008, 12:06:00 AM
ကိုစေးထူးရဲ့အတွေးစိတ်ကူး နဲ့သရုပ်ဖေါ် ရေးသားထားပုံလေးက ကောင်းလိုက်တာ ဆိုတာထက် အများကြီး ပိုပါတယ်။ လူတစ်ကာကို ရန်လုပ်ချင်၊ မူးပြီး ရမ်းချင်၊ နပမ်းသတ်ချင် ဖြစ်နေတာတွေထက်စာရင် အပြုံးကိုဆောင်နေတာက အများကြီး တော်သေးတာပေါ့ လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်..။
ပြုံးပုံ ပြုံးနည်းတွေကိုတော့... အင်း.. သရုပ်မခွဲလိုတော့ပါဘူးလေ။
သက်ဝေလဲ အဲဒီလို ကြက်ပျံမကျ စည်ကားနေတဲ့ ဈေးတန်းလေးထဲမှာ သိပ်ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ မဟုတ်ပေမယ့် ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် ကြိုးစားပမ်းစား ခင်းကျင်းထားပါတယ်။ အားလပ်လို့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာ တစ်ခေါက်တကျင်း ၀င်ရောက် လည်ပတ်စေချင်ပါတယ်...။ (ကြော်ငြာဝင်တယ် လို့ တော့ မထင်စေချင်ပါ... :-P)
Jul 26, 2008, 12:29:00 AM
ဈေးတန်းထဲမှာ နေခဲ့ဖူးတယ် ပျော်ခဲ့ဖူးတယ် ခုတော့ ပြန်မယ် ကြိုက်တာလုပ် အောရိုက် ကျွန်တော့်ဆီတော့ လက်ကား လာဝယ်သားကလား :D
Jul 26, 2008, 12:34:00 AM
ဈေးတန်းကလေး နဲ့ ဆိုင်ခန်းလေးတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကိုပုံဖော်ပေးထား တဲ့ ကိုစေးထူး ရဲ့အတွေး အရေး လေးတွေကို နှစ်သက်မိပါတယ် ၊၊
ဈေးလာဝယ်သူ ၊ဈေးလည်ပတ်သူ တွေအားလုံးနဲ့ဈေးတန်းကလေး စည်ကားမြိုင်ဆိုင်နေတာလေးကိုကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်မိပါ
Jul 26, 2008, 12:41:00 AM
ဈေးသည်လေးတစ်ယောက် လာရောက်သွားပါတယ်ဗျာ ဒီဈေးသည်လေးက ဒီဆိုင်က ဈေးသည်ကြီးရဲ့ ရောင်းနည်း ရောင်းဟန်တွေကို အမြဲ သင်ယူနေကြောင်းပါ လမ်းကြုံရင် ကျနော့်ဆိုင်က အသုတ်စုံချဉ်ငန်စပ်လေးတွေ အားပေးပါအုံး ;)
Jul 26, 2008, 4:15:00 AM
ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ သူအဲဒီလို လျှောက်သွားတာ လျှောက်လည်တာ အပြစ်လို့ မမြင်ဘူး...။ ဘယ်သူ့ကို နစ်နာစေ လို့လဲ(1001ကို လူတိုင်းဖတ်ဖူးမှာပါ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်စေလိုတယ်)...။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် သူအဲဒီလို ဘလော့တစ်ခုကို သွားလည်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဘလော့ဂါတစ်ယောက်က ပျော်ပါတယ်(ခင်ဗျားလို နာမည်ကြီးဘလော့ဂါတွေ အတွက်တော့ တစ်မျိုးပေါ့)...။ အဲဒီကိစ္စကို အပြစ်တစ်ခုလို ယူဆပြီး အခုလို စောင်းမြောင်းရေးတာက မှားတယ်လို့ မြင်ပါတယ်...။
Jul 28, 2008, 6:17:00 PM
ကျနော်ရေးတာဟာ စောင်းမြောင်းရေးတာ မဟုတ်ဘဲ ဒဲ့ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကာယကံရှင်ကတောင် တိုက်ရိုက်သိပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ လိုက်လည်တာကို ကျနော် အပြစ်တင်နေတဲ့ပုံစံလဲ မရေးခဲ့ပါဘူး။ လိုက်လည်နေလို့လဲ ကျနော့်ကို ဘာမှမထိခိုက်သလို ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ ထိခိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အပေါ်မှာ ရေးသွားကြတဲ့ များစွာသော ကွန်မန့်တွေကို ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲ အရေးခံရသူကို ထိခိုက်နစ်နာတယ်လို့ ထင်တဲ့လူ မရှိပါဘူး။ အရင့်အရင်ကလဲ ကျနော်နဲ့ တွေ့ရ၊ကြုံရတဲ့ လူတွေထဲက လူတချို့ရဲ့ မှတ်သားလောက်စရာတွေကို ကျနော် ပို့စ်လုပ်ပြီး ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဥပမာ... `သူနဲ့ ကျနော်´ ပို့စ်...။ အခုရေးလိုက်တာ အဲဒီပို့စ်ပုံစံနဲ့ သိပ်မခြားနားလှပါဘူး။ ဘ၀တကွေ့မှာ လူတွေနဲ့ ကျနော် ထိတွေ့ဆက်ဆံရတယ်၊ အဲဒီလူတွေထဲက တချို့ စိတ်တံခါး တစိတ်တပိုင်းကို ကျနော် သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ လှစ်ဟပြကြည့်တဲ့ သဘောထက် ဘာမှ မပိုပါဘူး။
Jul 28, 2008, 7:34:00 PM
အဲဒါ... .....ကို ပြောတာကိုးးးး
Jul 29, 2008, 10:03:00 AM
ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီဈေးတန်းထဲမှာ မြုပ်မှန်းမသိ နှစ်မြုပ်နေခဲ့တာ တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ် အစ်ကိုရေ။ :) အစ်ကို့ ဆိုင်ခန်းလို စေတနာကောင်း၊ အရည်အသွေးကောင်းပြီး၊ ဈေးနှုန်းမျှတတဲ့ ဆိုင်ခန်းလေးတွေ များများပေါ်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Aug 6, 2008, 4:33:00 PM
သေချာဖတ် မဖတ် တော့မသိဘူး။
ပြုံးနေတဲ့ အရုပ်တွေနဲ့ လာလည်သွားပါသည်ဆိုတဲ့ သူ့နာမည်နဲ့ စာကြောင်းတွေက ဘလောက်တော်တော်များများရဲ့ စီဘောက်စ်မှာ တွေ့နေရတယ်။
သူလာလည်တာ ဘာထူးဆန်းပါသလဲ လို့တွေးမိပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်ဘလောက် မ၇ှိတဲ့ စာဖတ်သူတွေအများကြီးပါ။ နာမည်မရှိ နာမည်မကြီး စာဖတ်သူတွေပါ။
Sep 28, 2008, 1:05:00 AM